Shaqada iskaa wax u qabsho - InfoFinland
Nolosha Finland > Waqtiyada firaaqada > Shaqada iskaa wax u qabsho
Shaqada iskaa wax u qabsada ah waa hab fiican oo dadka lagu caawiyo, barto dad cusub islamarkaasna qeyb looga noqdo arrimaha adiga muhiimka kuu ah. shaqada iskaa wax u qabsada ah waa ka duwan shaqada caadiga ah ama shaqo ku tababarasahda.
Gelitaanka nolosha shaqada
Haddii waaya aragnimadaada shaqo ee Finland ay yartahay ama aad si fiican u aqoonin finnishka, shaqada iskaa ah ayaa ah hab wannaagsan oo lagu geli nolosha shaqada islamarkaasna lagu wanaajin karo aqoonta luqadeed.
Shaqada iskaa ah mushaar lagama helo laakiin waaya aragnimada shaqado ayaa ahaan karta faa’iido u leedahay marka codsaneyso shaqo mushaar ah. Waxaa wanaagsan in shaqada iskaa ah la weydiisto shahaadada shaqada. Toos ula xiriir ururka aad rabto inaad ka qabato shaqada mutadawacnimada ah.
Haddii aad qaadato lacagta ammaanka shaqo la’aanta, horay uga sii hubso Xafiiska shaqada in shaqada mutadawacnimadu ay saameyn ku leedahay helitaanka lacagta ammaanka shaqo la’aanta. Siyaabo qaarkood waxaad heli kartaa shaqada iskaa wax u qabsada iney noqoto qorshaha u fuddudeynta la qabsiga.
Shaqada iskaa ama mutadawac waxaa sidoo kale laga heli karaa hiwaayad wanaagsan. Inta badan adiga ayaa go’aansan kara waqtiga iyo inta jeer ee aad ka qeybqaadaneyso waxqabadka. Shaqada mutadawaca waxaad kula kulmi kartaa dad sida xiiseeya arrimo lamid ah kuwa aad adigu xiiseyso waxaadna ku heli kartaa saaxiibo cusub. Waxaad sidoo kale nolosha shaqada uga faa’iideysan kartaa xiriirada aad ku sameysatay gudaha shaqada mutadawacnimada.
Shaqooyinka mutadawacnimada ahFinnish
Shaqooyinka mutadawacnimada ahFinnish | Iswidish | Ingiriis
Shaqooyinka mutadawacnimada ahIngiriis
Hagaha shaqada iskaa ahFinnish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 27.01.2021 Boggan war-celin ka soo dir